Kitra – «Ligue des champions Mada 2016» : misongadina ny FC Vakinankaratra | NewsMada
Kitra – «Ligue des champions Mada 2016» : misongadina ny FC Vakinankaratra
Tontosa omaly, ny andro fahatelo amin’ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra «Ligue des champions 2016». Anisan’ny ekipa misongadina ny FC Vakinankaratra, ho an’ny sokajy «C», milalao eto Antananarivo. Fandresena hatrany mantsy no azon’ity klioba tompondakan’Antsirabe ity. Nomontsaniny tamin’ny isa mazava 3 noho 0 indray, mantsy ny FC Black Star avy any Vatovavy Fitovinany. Mitarika ao amin’ity sokajy ity, ry zareo FC Vakinankaratra.
Ankoatra izay, nomontsanin’ny Tana Formation, tamin’ny isa mavesatra 11 noho 0 ny SFF FC-n’Amoron’i Mania. Tsy niady mihitsy ny fihaonana satria hita tena mifanalavitra mihitsy ny fahaiza-manao, eo amin’ny roa tonta. Mbola nahazo fandresena toy izany koa ny Cnaps Sport, izay nanilika ny AJS Melaky, tamin’ny isa 4 noho 0.
Ho an’ny vondrona “A”, izay milalao any Mahajanga dia mitarika hatrany ny FC Joel, taorian’ny fandavoany ny RTS – Jet Mada, tamin’ny isa 2 noho 1.
Nifoha tamin’ny torimasony kosa ny FCE, ho an’ny sokajy “B”, tany Toamasina. Resin’ny ekipan’Atsinanana, tamin’ny isa 2 noho 1 ny FC Otiv ary lavon’ny Ajesaia, tamin’ny isa tokana 1 noho 0 kosa ny Elgeco Plus.
Tany Fianarantsoa, nisaraka ady sahala 1 sy 1 ny ASJF Capricorne sy ny FC Jocker, ho an’ny sokajy “D”.
Hitohy, rahampitso zoma 19 aogositra, ny andro fahefatra amin’ity fifaninanam-pirenena ity, izay hanana ny lanjany satria mety efa hahitana taratra ireo ekipa telo tafita amin’ny dingana manaraka.